नेपालको बिजुली चीन र बंगलादेशलाई बेच्छौँ. ऊर्जामन्त्री पुन | Saajha Khabar
नेपालको बिजुली चीन र बंगलादेशलाई बेच्छौँ. ऊर्जामन्त्री पुन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित दोस्रो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय इनर्जी फोरमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले नेपालमा स्थायित्व र विकासको युग सुरु भएको उल्लेख गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन्। मन्त्री पुनले विगतको तुलनामा ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा उल्लेख्य सुधार भएको बताएका थिए।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले चीन र बंगलादेशसँग द्विपक्षीय विद्युत व्यापार तथा समन्वय प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका थिए। उनलेले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भइसकेको जानकारी दिँदै अब वंङगलादेश र चीनसंग पनि छिट्टै उक्त सम्झौता हुने बताएका थिए। मन्त्री पुनले ऊर्जा तथा विद्युतको क्षेत्रमा चीनसहित सार्क र बिमस्टेक स्तरमा क्षेत्रीय सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले क्षेत्रीय सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक विकास र विद्युत उत्पादन विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। मन्त्री पुनले भने, ‘हामीले भारतसँग पिटिए सम्झौता गरिसकेका छौँ, अब चीन र बंगलादेशसँग पनि हामी पिटिए गर्ने तयारीमा छौँ। यसबाट क्षेत्रीय विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ।’ उनले दिगो र गुणस्तरीय विद्युत विकास गर्न क्षेत्रीय सदस्यबीच सम्बन्ध बलियो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
मन्त्री पुनले नविकरणीय ऊर्जालाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीति भएको बताएका थिए। वैदेशिक लगानीको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिएको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नसमेत उनले आग्रह गरेका थिए। सदस्य राष्ट्रहरूबीच घनिष्ट सम्बन्धमा जोड दिँदै मन्त्री पुनले विद्युतलाई आर्थिक विकाससँग जोड्न पनि सदस्य राष्ट्रबीच अन्तर–आबद्धता आवश्यक रहेको बताएका थिए। ऊर्जामन्त्री पुनले म्यानमारका ऊर्जामन्त्री जयर अंग र पाकिस्तानी समकक्षी अहमद खानसँग भेटवार्ता गरेका छन्। मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काकाअनुसार भेटमा पाकिस्तानी ऊर्जामन्त्रीले आफ्नो देशको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा ऊर्जामन्त्री पुनलाई जानकारी गराएका थिए।
पाकिस्तानी ऊर्जामन्त्री नविकरणिय ऊर्जामा जोड दिन र स्मार्ट विलिङ सिस्टममा जान मन्त्री पुनलाई सुझाव दिएका थिए। बिमस्टेक ऊर्जा फोरमको अध्यक्षता गरिरहेको म्यानमारका ऊर्जामन्त्री जयर अंगसँगको भेटमा मन्त्री पुनले फोरमको तेस्रो बैठकको अध्यक्षता नेपालले गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले त्यस अवसरमा अंगलाई नेपाल भ्रमण गर्नसमेत निम्तो दिएका थिए।
Previous: तपाईं शनिवार जन्मनुभएको हो ? त्यसो भए शनिबार जन्मने व्यक्तिले अवश्य पढ्नुहोला …
Next: बि.स.२०७४ चैत्र २५ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०१८ अप्रिल ०८ तारिख । नेपाल सम्बत् ११३८ ।